Nkọwapụta --lọ ọrụ - Guangdong Yuanfang Technology
Ọ dị mfe ịmalite azụmahịa, mana ọ na-esi ike ịmeghe ya.
Yuanfang Technology dị ka ihe ISO 9001: 2015 gbaara onye nkwụsị shop bụ ọkachamara na imewe na n'ichepụta nke nkenke ọgwụ ebu na plastic kpụrụ akụkụ kemgbe 1996.
24 + afọ
50 tent / ọnwa
Kedu ndị anyị bụ?
N'ebe ahụ mgbe ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike na-ekpuchi ọtụtụ ọrụ ozugbo ha nwere ike, onye nwe anyị, yana injinia izugbe Mr. Henry Liao, n'aka nke ọzọ na-etinye ego ya na nka ya na afọ 20 nke mmepe na mmelite iji mezuo ọtụtụ ndị ahịa. na-akpata ọchịchọ maka Omenala, nkenke na adịchaghị ebu.
Tọrọ ntọala na 1996 aha ya bụ Hanking akpụzi malitere ebu n'ichepụta na injection ịkpụzi azụmahịa na Shenzhen.
Na 2017, iji zaghachi nke ọma maka uto nke ahịa nke esenidụt, HanKing Mold guzobere a ọkachamara nkenke ebu n'ichepụta ụlọ ọrụ dị ka Guangdong Yuanfang nkenke Technology Co., Ltd. na-eje ozi maka ndị ahịa anyị gburugburu ụwa.
Na Yuanfang Technology, anyị na-ekewapụ onwe anyị na asọmpi anyị dabere na ahụmịhe anyị dị ukwuu na njikwa injinia anyị na ngwa ọrụ anyị. Ndị ọrụ anyị nwere ọrụ na ndị injinia nwere ike ijikwa ụfọdụ ihe siri ike nghọta nke ọtụtụ ndị asọmpi anyị enweghị ike ịnagide.
Nnukwu Uche na Ihe niile Ebu Ebu.
Original factory kpọmkwem price
Mafere n ’azu na azụ maka ndị na - eweta ngwa ọdịnala gị. Tinye Yuanfang dị ka onye na-ere maka ngwụcha ngwụcha.
Yuanfang na - eme ka arụ ọrụ dị mma
Projectlọ Ọrụ Njikwa Projectlọ Ọrụ anyị na-enyocha ohere nke ọrụ ngwá ọrụ, nnyefe na ụgwọ. Ndi oru oru ngo a na - ejigide nkwurita okwu banyere oru ngo a n’ime n’ime ya na nke onye ahia ya.
Tụkwasị obi ma nwee ahụmahụ na ahịa ọdịda anyanwụ
Yuanfang nwetara na plastic injection Ebu na mmepụta maka esenidụt ahịa karịrị afọ 10; anyị guzobere Mgbe-sales ọrụ emmepe na Europe & North America na ga-ọzọ na, na-enye ebu mmezi na oru nkwado.
Ndị na-akpụzi ihe ntanye, Ndị na-emepụta ebu ebu, Akpụzi Factory, Ọgwụ Nkedo na Metal Inserts, Omenala akpụzi, Plastic Fanye Nkedo,